Home Wararka Maamulka Garbahaarey oo shirkadaha diyaaradaha ugu digay iney soo qaadaan guddiga qiimeynta....
Maamulka Garbahaarey oo shirkadaha diyaaradaha ugu digay iney soo qaadaan guddiga qiimeynta. Sabab?
Mas’uuliyiinta ugu sarreeysa Maamulka degmada Garbahaareey ee Xarunta Gobolka gedo ayaa guud ahaan Shirkadaha diyaaradaha waxaa ay uga digeen inay degmada keenaan Xubnaha Guddiga qiimeynta Garbahaareey uu u Magacaabay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Guddoomiye kuxigeenka amniga & Siyaasadda degmada Garbahaareey ayaa sheegay in diyaaradii soo qaada Guddiga wixii ka yimaada mas’uuliyadeeda ay iyada qaadeyso, taas oo runtii ah gef weyn oo ay tahay mas’uulkaas iyo cidda la aabtaaba lagu maxkamadeeyo.
Sababta dhabta ah ayaa ah in haddii guddiga uu tagi waayey oo ay jirto cid amarka RW dalka diidi kartaa ay muujineyso inay tahay degmo aysan dowladda Somaliya ka talin, wax doorasho ahna aan lagu qaban karin, ilaa laga xoreynayo koxda haysata.
Farmajo ayaa raba inuu awod ku qaato kuraasta qabiilkiisa kuwooda dega Gedo.
Arrinkan ayaa muujinay meesha uu Farmajo dalka gaarsiiyey iyo foolxumada uu reer Gedo u soo jiiday.
Qiimeyntu waxay ku caddahay haddii aanu guddiga tagi karin inaysan nabad ahayn oo ayba sidaas ku qiimeysan tahay.
Previous article[XOG] Beesha Caalamka oo isha ku haysa Qalalaasaha aay Farmaajo & Fahad ka wadaan Garbahaarey iyo Beledweyne
Next articleDowlada Kenya oo dalkeeda ka masaafurisay Xasan Kheyre. Waa maxay Sababta?
Fatahaad uu sameeyay wabiga juba aya saameyay nolosha bulshada baardheere
Laba Xildhibaan oo ka tirsan Maamulka HirShabelle oo mushaarkii loo diiday...